Basiza omasipala ezinhlelweni zamanzi
UTHEMBALETHU Nene osebenza e-Utility Systems uthathwe akha i-meter enobuchwepheshe besimanje. Isithombe: BHEKI MBANJWA
BONISWA MOHALE | September 20, 2019
UNGQONGQOSHE wezeziMali KwaZulu-Natal, uMnuz Ravi Pillay, ugqugquzele i-Utility Systems ukuthi ihlomise abantu ngamakhono amasha njengoba le nkampani ijika izinto kwezokongiwa kwamanzi komasipala abehlukene.
I-Utility Systems yinkampani eyakha ama-meter ahambisana nobuchwepheshe besimanje okukhona kuwo angadingi ukufundwa ngabantu nobuchwepheshe obukhombisa amapayipi aqhumile ukuze kongiwe amanzi.
Izolo i-Utility Systems ibinomcimbi wokugubha uguquko oselwenzekile kule nkampani kwazise u-60% wayo usuphethwe Inzalo Holdings kaMnuz Sihle Ndlovu noMnuz Sibonelo Mazibuko.
ISebata Holdings idayisele Inzalo Holdings u-60% wamasheya ayo ngoba izimisele ngokuhambisana nezinhlelo zoguquko.
Amasheya eSebata Holdings athengwe Inzalo Holdings ngoR388.4 million ngesikhathi ithola u-55% yase inikelelwa u-5% ngaphezulu.
UMnuz Sihle Ndlovu, onguSihlalo we-Utility Systems, uthe ukuthola kwabo u-60% kusho ukushintsha kwezinto ngoba kuzodaleka amathuba omsebenzi engeziwe kwazise okwamanje banabasebenzi abawu-80.
Uthe bazoletha nabantu besifazane kulo mkhakha ogcwele amadoda.
Uveze ukuthi inkampani yabo izolekelela uhulumeni ngezinhlelo zamanzi zika-2025 kwazise seyakhe izinsiza kusebenza zamanzi eziwu-1.4 million ezisebenza komasipala abahlukene.
UMnuz Sibonelo Mazibuko oyisikhulu esiphezulu se-Utility System, uthe basebenzisana nomasipala abahlukene okukhona kuwo oweTheku, owaseCape Town, owaseGoli, owaseMangaung nabanye.
UPillay uthe bayajabula ngokwenziwa yi-Utility Systems futhi bayaziqhenya ngoguquko abalubona kuyona ngoba uhulumeni ufuna kudalwe amathuba omsebenzi.
“Uhulumeni ufuna kube noguquko kwezomnotho, kudalwe amathuba omsebenzi, kuqinisekiswe ukuthi bonke abantu baseNingizimu Afrika bafundile futhi nezempilo zibe sezingeni eliphezulu. Kubalulekile ukuthi uma siletha uguquko lwezomnotho singabashiyi ngaphandle abanye abantu. Akufanele kube khona abezwa sengathi baphucwa okuthile kodwa kufanele sibambisane njengoba kwenzeka e-Utility Systems,” kusho uPillay.
Uthe bayaziqhenya ngokuthi inkampani yaseNingizimu Afrika inobuchwepheshe bokonga amanzi kodwa kuyabakhathaza ukuthi ubuchwepheshe besimanje buzoqeda imisebenzi.
“Ngesikhathi niza nama-smart meter kufanele nihlomise abantu ngamakhono azobasiza ukusebenza kuwona ngoba asifuni ukwandisa isibalo sabaswele umsebenzi. Siyajabula ngokuthi u-90% wemikhiqizo yenu usebenzisa izinto ezakhiwa eNingizimu Afrika ngoba asithandi kulandwe impahla eningi kwamanye amazwe. Kwenza siziqhenye ngani nokuthi ninama-learnership athatha abafundi abawu-30 abenza izifundo ze-engineering. Kuyasichaza ukuthi ubuchwepheshe benu ngobalapha eNingizimu Afrika akukho enikuthatha kwamanye amazwe,”
Uthe bayathemba noMnyango wezoHwebo neziMboni uzolekelela i-Utility System ngaphansi kohlelo lwayo losozimboni abamnyama.